Tobim-pako Central Coast - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Ny Central Coast Council dia manome trano fanariana fako 2 ho an'ny fanodinana, famerenana, fampiasana ary fanariana fako any amin'ny morontsiraka afovoany.
Ny fako sy ny fanodinana dia azo entina any amin'ny Tobim-pitantanana ny fako ao Woy Woy any amin'ny farany atsimon'ny morontsiraka afovoany sy ny Tobim-pitantanana ny fako ao Buttonderry any avaratra. Mivoha fito andro isan-kerinandro ireo trano roa ireo afa-tsy amin’ny andron’ny Krismasy, Taom-baovao ary Zoma Masina.
Adiresy: 850 Hue Hue Rd, Jilliby
7am-4pm - Alatsinainy hatramin'ny Zoma, tsy anisan'ny andro tsy fiasana
8 ora maraina-4 hariva - Sabotsy, Alahady ary fialan-tsasatra
Mihidy amin'ny Andro Krismasy, Taom-baovao ary Zoma Masina
Foibem-pihodinan'ny vondrom-piarahamonina: Ekena ao amin'ny Tobim-pitantanana ny fako ao Buttonderry ny kojakoja fako sasany mahazatra ao an-tokantrano Foibem-pandrefesana ny fiaraha-monina tsy andoavam-bola.
Adiresy: Nagari Rd, Woy Woy
8am-4pm - Sabotsy, Alahady ary andro tsy fiasana
Tsidiho ny tranokalan'ny Filankevitra raha mila fanazavana momba ny entana ekena, ny sarany ary ny sarany.
Fanavaozana lehibe momba ny Tobim-pitantanana ny fako Kincumber
Taorian’ny fijerena ifotony ny fampandehanan-draharaha sy ny fotodrafitrasa ao aminy dia tapaka ny fanapahan-kevitra hanakatona ny tobim-pamokarana fako ao amin’ny Kincumber Facility. Ny filankevitra dia handinika indray ny tranokala ho an'ny fampiasana hafa ary hitazona ny vondrom-piarahamonina vaovao mandritra ny dingana.
Mbola afaka manary ny fako any amin'ny trano Woy Woy sy Buttonderry ny mponina na manararaotra ny serivisy fanangonam-pako an-trano betsaka amin'ny sisin-dalana. Ny tokantrano dia mahazo fanangonam-bokatra 6 isan-taona, izay averina isan-taona amin'ny 1 Febroary ary azo ampiasaina amin'ny ankapobeny sy be dia be, ary koa ny zaridaina sy ny zavamaniry. Raha te hianatra bebe kokoa sy hamandrika, tsidiho ny pejy fanangonanay Bulk Kerbside Collections.